Creating custom helper in Laravel
By Set Kyar Wa Lar 1 year ago
Laravel မှာ helpers methods တွေတော်တော်လေးပါပါတယ်… ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ application လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးကိုယ်ပိုင် helpers တွေတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခါဘယ်လို create လုပ်ရမလဲဆိုတာပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
What’s Laravel Dusk?
ကျွန်တော်တို့ application တွေမှာ testing ရေးကြတဲ့အထဲကမှ Laravel Dusk က browser testing အတွက် Laravel ကရေးထားတဲ့ package တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အရင်က browser test ရေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ selenium နဲ့ရေးကြပါတယ်။ Selenium နဲ့ရေးတဲ့အခါမှာ java -jar နဲ့ selenium ကို run ထားရပါတယ်…
Adding Custom Error Page On Laravel 5.3
Laravel 5.3 မှာ errors page တွေ ဖြစ်တဲ့ 404 တို့ 503 တို့... ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ error pages တွေကို customize လုပ်တာအရမ်းကိုလွယ်ကူသွားပါပြီ... ဒါကိုကျွန်တော်က Beginner တွေအတွက်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်...
Upgrade To Laravel 5.3. From 5.2
ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Laravel 5.2 app ကို Laravel 5.3 ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ပမဆုံးအနေနဲ့ Laravel Doc က Upgrade Guide ကိုအရင်သေချာဖတ်ပါ။ ပြီးရင် Doc ကပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်လိုက်ရုံပါဘဲ။
Dive in to laravel scout
By Sithu Aung 1 year ago
ဒီနေ့ laravel scout နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး လက်တွေ့ သင်ခန်းစာတွေ လုပ်ကြည့်ရအောင်ဗျာ။
laravel scout ဆိုတာ Eloquent models တွေကို search driver အသုံးပြုပြီး full text search ရှာချင်ရင် သုံးတာပါ။
Telegram Notification with Laravel
ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Laravel Notification Channel က Telegram Notifications Api Package ကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လို Noti Message ပို့မလဲဆိုတာရေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်…
Copyright © 2018 PHP Myanmar . www.phpmyanmar.org